Nzira Yokuita Nayo Uye Usapinda Spyware Pa A PC, Izvi Uye Zvakawanda Zvakare Kubva Semalt
Spyware inopesana nezita harina chokuita nehupenzi kana mabasa asingazivikanwi. Zvechokwadi, panzvimbo pekuvhara mapoka operatives, spyware inoshandiswa mukudhinda. Inotumidzwa zvakare seadware. Zvechokwadi, spyware kana adware inoreva rudzi rwemapurogiramu akambomiswa paPC yako kana kuti inodzokorora web browser yako kune itsva matabhi kana kubuda matangazo. Mune zvimwe zviitiko, adware inogona kushandiswa kuongorora kuti unowanzoshanyira sei mawebsite - tanya jawab perjudian indonesia. Mune zviitiko zvakanyanyisa, vashandisi ve-cyber vanogona kushandisa spyware kuti vaongorore zvigetsi zvaunoshandisa kupinda mu (key-logging) muakaunti dzako. Zvinogona kushandiswa kune zvimwe zvinangwa zvinotyisa.
Kana software yacho inopinda mumutambo wako, zvino inosvibisa. Zvose zvakafanana, pane chikonzero chekufunga nezvezvakavanzika zvevamwe. Ross Barber, the Semalt Mutengi Wakabudirira Mutengi, anorayira kuzvibvunza mibvunzo inotevera:
Ndeapi mashoko ari kuunganidzwa?
Mashoko acho angashandiswa sei?
Kuona spyware mumutambo wako
Zviratidzo zvinotevera zvinofanira kukunyevera nezve spyware intrusion:
kana mahwindo achienderera mberi paunenge uchiita mabasa pa PC yako, laptop kana tablet;
kana iwe uchiramba uchitungamirirwa kune zvitsva pa web browser yako nguva dzose kana usati waita saizvozvo;
kana zvishandiso zvitsva zvinoramba zvichiratidza pane web browser yako;
kana ukawana shanduko iwe usina kuisa kunyanya kutsvaga injini yekutsvaga kana kuti default homepage;
kana kushandiswa kwemaitiro kusinganzwisisiki zviti maWindows mapikicha anoonekwa, mabasa anotora nguva yakareba kuti aite semugumisiro wegadziriro yekudzvinyirirwa nemabasa ekutanga. Nzvimbo padiki disk drive inoderedzawo..
Unozvidzivirira sei kune spyware?
Muzviitiko zvizhinji, spyware inoiswa pasina chinangwa chako. Zvose zvakafanana, kune zvimwe zvingaita kuti urege kukuvara:
usambofa pazvikwata zvinowanikwa pamahwindo ekuputika: nekutadza, mahwindo epamusoro ari zvishandiso zvinoshandiswa nevatengesi vane kana kana vasina kubvumirana vanogona kuisa spyware. Kana iwe uchida kuvhara firiji ye-pop-up, chengeta 'x' icon.
kupindura ne 'kwete' apo iwe unobvunzwa mibvunzo yeer queer. Ngwarira pamabhokisi ebhokisi nemibvunzo yakadai se "ungada here kuisa purogiramu yakadaro?" Nguva dzose yega kana kubvisa mabhokisi ebhokisi.
kudzivisa mapurogiramu asingakwanisi kuwanikwa. Panogona kuva nemamwe mapurogiramu anopa zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana-siyana uye zvimwe zvinhu. Zvinogona kutarisa zvakanaka, asi zvimwe zvingave zvingangova zvinotyisa.
rega kushandiswa kwemashoko e-mail inotaurira kupa sarudzo yakasununguka-spyware
Panogona kuva nechiitiko chaunofungidzira kuti urongwa hwako hwakapindirwa ne spyware. Kana iyi ndiyo mamiriro acho ezvinhu, shandura iwe web browser yako zvaunoda kuti udzike ma cookies nemapurogiramu ep-up. Mamwe makiki anonzi se spyware nokuti vanocherechedza basa renyu rewebhu uye vanotumira deta kune mamwe masimba asingazivikanwe.
Isa nekuvandudza chirongwa chako chekare. Izvi zvinoshandiswa nevantiviruses zvinogona kuona nekubvisa spyware. Gadzira chigadziko chemoto.
Tanga mapurogiramu akakodzera paPC yako, laptop kana tablet. Dzivisa software inopwanyika kana iyo iyo kubhadhara yapera. Vanogona kukutora iwe mumatambudziko.